Burundi sidee u aragtaa ciidankeeda Muqdisho jooga? - BBC Somali
Burundi sidee u aragtaa ciidankeeda Muqdisho jooga?
25 Jannaayo 2012
Image caption Ciidan Burundi oo daba socda meyd laga soo dejiyay saldhig ciidan
Ciidammada AMISOM waxay waayadaan dambe soo hooyeen guulo ay al Shabab uga qabsadeen Muqdisho inteeda badan, welibana ay magaalada meelo ka baxsan laga yaabo in ay u sii gudbaan. Si kastaba ha ahaatee, askar badan oo AMISOM ah ayaa ku dhintay dagaallada Muqisho. Burundi tusaale ahaan waxaa uga dhintay laba General oo midna ay dayaaradi la soo dhacday, midna uu ku dhintay weerar is qarxin ah oo al Shabab ay ku qaadday garoonka dayaaradaha. Haddaba dadka reer Burundi sidee u arkaan hawlgalka ciidankoodu u joogaan Soomaaliya? Weriyaha BBC Prime Ndikumagenge ayaa mikrofoonka la dhex maray dadweynaha Bujmbura, caasimadda Burundi.
***** Uma maleynayo in ciidanka Burundi ay Soomaaliya nabad ku soo celin karaan. Xataa Mareykankaa ku fashilay. Inkasta oo ay dhab tahay in Burundi gacan lagu siiyay in ay nabad ka dhaliso Soomaaliya, haddana waxay ila tahay in colaadda Soomaaliya ay ka gun dheer tahay sida la moodo. Marka la fiiriyo tirada ciidammada Burundi ee ilaa hadda ku dhintay dagaalka Muqdisho, waxay u muuqataa in ciidankeenna loo diray ku maqan yihiin hawl is biimeyn ah oo aysan ka badbaadi doonin.
***** Waxaan cabsi ka qabaa in askartu ay ku faraxsan tahay in ay aadaan Soomaaliya ayada oo sababta keliyihi tahay lacagta wanaagsan ee ay qaadanayaan.Qof aan xidid nahay ayaa ku jira guutada aadi doonta halkaas. Haddaan awoodo, waan ka joojin lahaa in uu baxo, sababta oo ah, qaar badan ayaa ku dhintay dagaalkaas.
Ra'yigu ma xuma, laakiin waxaan cabsi ka qabaa in al Shabaab ay sii laba laabto dagaalkeeda sidii al Qaacida. Adku waxay yiraahdaan Africa ayaa nabad ka dhilenysa Soomaaliya. Waxaa la is weydiin karaa, sidee Afrika nabad uga dhalin kartaa Soomaaliya marka aan dalal badan oo Afrikaan ahi aanay ayaguba nabad heysan. Kaba billow dalkeyga Burundi. Halkaan maalin walba dad ayaa ku dhinta. Fiiri waxa ka dhacaya Liibiya, markii Qaddaafi dhacay. Iskaba illow Nigeria, halkaas oo khilaaf diimo u dhexeeya dartiis maalin kasta ay masiibo ka taagan tahay.
Ciidankeenna lama weydiinayo in ay rabaan in ay aadaan Soomaaliya iyo in kale. Waa shaqadooda. Marka ayaga oo nabad qaba ay Soomaaliya ka soo laabtaan, waa sida mucjiso oo kale. Waa sidii carruurt ooyeysa laakiin hooyadood aanay dheg u dhigeyn ooyintooda.
Qodob kale oo Ka Qayb Gal ah